CAD: ihe nile banyere komputa enyere aka na komputa | Akụrụngwa n'efu
Isaac | | General, Nkọwa 3D
Kemgbe komputa jiri na ulo oru, otu n’ime ihe izizi etinyebere na ya bu na Nhazi CAD nke mmiri. Kọmputa nwere ike ịmebe ihe bara uru karịa iji usoro ndị a na-eme n'oge ahụ, yana ikwe ka hazie ngwa ngwa ahụ ngwa ngwa, dị mfe iji bipụta ụdị a, wdg.
Ugbu a, ngwaọrụ CAD agbanweela ọtụtụ. Ugbu a sọftụwia dị adị zuru oke ma na-enye ohere ịme ọtụtụ ihe karịa mmemme CAD oge ochie. Na mbata nke Nkọwa 3D, mmemme ndị a abụrụla ihe bara uru na ụlọ ọrụ na ije.
1 Kedu ihe bụ CAD?
2 Mmemme CAD kacha mma
2.1 3D ebi akwụkwọ software
Kedu ihe bụ CAD?
CAD bu ihe achoputara Computer-Aided Designing, ya bu, komputa enyere aka. Otu ụdị sọftụwia iji nwee ike ịmepụta ọtụtụ ọrụ na nke a na-eji na mpaghara dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ, site na imepụta akpa, na ụlọ, site na imepụta akụkụ nke igwe, injin, akụkụ nke ụdị ọ bụla, ugbo ala, sekit , wdg.
A nwekwara ike iji ya chepụta ihe odide ma jiri ya na ihe nkiri nkiri, ịme anwansị, wdg. Na software CAD nke taa emeela njem dị ogologo, na-ekwe ka ngwa dị ọtụtụ. N'ezie, mmemme amalitela ikwe ka 2D, imewe 3D, itinye ederede, akụrụngwa, nghazi usoro, ọkụ, mmegharị, wdg.
Mana ruo ugbu a, ọtụtụ agbanweela kemgbe mmalite. Na iji hụ mmalite ahụ, ị ​​ga-alaghachi 50s, mgbe ụfọdụ mmemme eserese malitere iji na MIT iji hazie data nwetara site na usoro radar nke North American Air Force. N'ụzọ ahụ, ọ nwere ike igosi ihe achọpụtara na radar na nyocha CRT.
N'otu ụlọ ọrụ ahụ, Inclọ nyocha Lincoln, ntọala nke ihe osise kọmputa anyị maara taa ga-amalite ịtọ ntọala. Nke a ga - eme na 60s, na - enye gị ohere iji keyboard na skịlị wee see onyonyo na ihuenyo. N’ụzọ yiri nke ahụ, arụpụtara ọrụ ndị ọzọ yiri ya na ụlọ ọrụ ndị dị ka General Motors, dịka ọrụ ITEK, kọmputa PDP-1 nwere vector veti nwere diski diski diski na-enye ume ọhụrụ, ya na mbadamba na elektrọnik iji banye data. .
Nke nta nke nta na usoro nọ na mma, na-abịa bds (Usoro nkọwa ụlọ site n'aka Charles Eastman, prọfesọ na Mahadum Carnegie Mellon. Ọ bụ ihu ọma ọbá akwụkwọ ma ọ bụ ntọala nwere ihe owuwu ụkpụrụ ụlọ enwere ike ịgbakọta iji chepụta ụlọ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya).
Usoro sitere na ITEK malitere ịmalite azụmahịa na 1965, bụ usoro mbụ Ahịa CAD Ọ na-efu ihe ruru $ 500.000 US dollar n'oge ahụ. Afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ụgbọelu na ụlọ ọrụ ụgbọ ala dị ka General Motors, Chrysler, Ford, wdg, malitere iji usoro CAD mbụ iji mepụta ngwaahịa ha.
Esisịt ini ke akpa usoro ga-abịa CAD / CAM (Kọmputa Na-enyere Aka n'ichepụta ihe), ya bụ, usoro CAD jikọtara ya na usoro ịmepụta iji mepụta akụkụ ndị emebere na CAD. Ọ ga-eji ya n'ọrụ ọsụ ụzọ site n'aka Lockheed, ụlọ ọrụ na mpaghara ụgbọelu.
Usoro CAD site na ngwụcha 70s na-adaba na $ 130.000, mana ka dị oke ọnụ. Ọ ga-abụ ruo mgbe 80s mgbe ọnụahịa CAD dị ọnụ ala karịa malitere itinye, dabara na ntọala nke AutoCAD (Autodesk) na 1982. companylọ ọrụ John Walker na-achị ụlọ ọrụ ahụ kemgbe, na-enye sọftụwia ihe na-erughị $ 1000 ma na-eme ka ọ dị ọtụtụ ebe na ojiji.
Na 90, sistemụ CAD malitere imeri nyiwe ndị ọzọ (karịa Sun Microsystems workstations, Digital Equipment, wdg) nke kọmpụta dị ọnụ ala, iru Microsoft Windows na PC. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, ụdị ngwanrọ a anọgidewo na-agbanwe ma na-ebelata ọnụahịa ya, ọbụlagodi na ọtụtụ ọrụ na-akwụghị ụgwọ na n'efu na-apụta ...
Mmemme CAD kacha mma
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere CAD imewe software na ị nwere ike iji taa, nke a bụ ezigbo nhọrọ ha. Agbanyeghi na enwere otutu ihe di nkpa ma buru kwa ihe eji eme ihe na ulo oru dika Autodesk AutoCAD, n'ihi na obu ihe ngwaike ngwaike, anyi gha elekwasikwa anya na ngwanrọ efu:
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị ọzọ kachasị mma na AutoCAD, na mgbakwunye na ịnwe ngwanrọ na n'efu, ọ bụ otu n'ime mmemme ọkachamara kachasị dị ugbu a. FreeCAD na-enye nnukwu ahụmịhe onye ọrụ, yana ọtụtụ ngwaọrụ dị yana nsonaazụ ọkachamara n'ezie, ma na 2D na 3D.
Ọ na-akwadokwa usoro MCAD, CAx, CAE, na PLM. Oghere, ya bụ, kernel geometry dị ike mepụtara na Python. Na mgbakwunye, ọ bụ ikpo okwu, na-arụ ọrụ na Windows, macOS na GNU / Linux.
LibreCAD Ọ bụ ụzọ ọzọ kachasị mma maka AutoCAD dị adị. Ọ bụkwa ebe a na-emeghe ma nweere onwe ya, dịka nke gara aga. Ọ nwere nnukwu obodo mmepe na-arụsi ọrụ ike, ọ na-arụkwa ọrụ maka Windows, GNU / Linux na macOS system.
Ọ na-etiti na Nhazi 2D (na usoro DXF na CXF), na-ebilite dị ka ọrụ ewepụtara (ndụdụ) site na mmemme ọzọ n'efu akpọ QCAD. E tinyela ọtụtụ ọrụ n'ime ya iji mee ka ọ dị mfe ma rụọ ọrụ na kọmputa ochie ma ọ bụ nwere obere ihe onwunwe, ọ na-enye ohere ngwangwa ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị si AutoCAD, ebe ọ bụ na interface ya yiri.
DraftSight bụ ọkachamara ọkachamara nke na-ebilite iji dochie AutoCAD na 2D imewe, yana mbipute ụgwọ maka ndị ọkachamara jiri ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ karịa ụdị n'efu. Na mgbakwunye, ọ bụ ikpo okwu maka GNU / Linux, Windows na macOS.
Freedị n'efu na-enye gị ohere ịmepụta, mepee, dezie ma chekwaa faịlụ na ụdị DXF na DWG nke Autocad, yana izipụ ndị ọzọ ọrụ. usoro dị ka WMF, JPEG, PDF, PNG, SLD, SVG, TIF, na STL. Yabụ, ọ nwere nnukwu ndakọrịta ma ọ bụrụ na ijikwa faịlụ sitere na mmemme ndị ọzọ ...
3D ebi akwụkwọ software
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eche nke n'ime mmemme ndị ahụ ka eji emepụta ihe na mgbe ahụ bipụta ha na ngwa nbipute 3D, mgbe ahụ ị kwesịrị ịnwe ụfọdụ mmemme ị nwere ike iji maka nke ahụ. Ekwuola m otu n'ime ha na ngalaba gara aga, ebe ọ bụ FreeCAD. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwekwara nhọrọ nhọrọ n'efu ma ọ bụ na-emeghe dị ka:
Design chepụta iche- bụ sọftụwia CAD bụ n'efu nke RS Components na SpaceClaim Corporation mepụtara. Emebere oru a maka oru ihe eji eme ihe na ihe eji eme 3D. Ke adianade do, ọ bụ nnọọ mfe iji, na a obi ụtọ eserese interface kwesịrị ekwesị n'ihi na ala-ajụ larịị ọrụ. download.
Bịanụ elu- Ọ nwere a dị mfe free omume na-inweta ewu ewu n'ihi na ọ na-enye ohere ngwa ngwa osise na nwere oké ngwa na ụkpụrụ ụlọ imewe. Njikọ ya sitere na ntanetị, ya mere enwere ike iji ya site na sistemụ dị iche iche, na-enye ohere mbupụ na STL maka ndị na-ebi akwụkwọ 3D. Nweta.
Uchechukwu: O nwekwara ngwa weebụ efu iji dọpụta obere mpempe dị mfe na 3D. A na-ejikarị ya eme ihe na agụmakwụkwọ n'ihi njirimara ya, na-enwe ike iji ya na oge ochie, dị ka cubes, okirikiri, cylinders, wdg, iji nwee ike ijikọta, tụgharịa ma debe ha iji mepụta ụdị mgbagwoju anya. N'ezie ị nwere ike mbupụ ụdị ndị ahụ na STL maka mbipụta 3D. Nweta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » General » CAD: ihe niile gbasara komputa enyere aka na komputa